Nchọpụta Ka Mma, Nsonaazụ Ka Mma: ResearchTech Platform Methodify | Martech Zone
Nchọpụta Ka Mma, Nsonaazụ Ka Mma: ResearchTech Platform Methodify
Mezie bụ akpaghị aka ahịa nnyocha n'elu ikpo okwu na ọ bụ otu n'ime nanị njuaka n'ụwa nile na-kpọmkwem mepụtara maka automating dum nnyocha usoro.
Ikpo okwu na-eme ka ọ dị mfe na ngwa ngwa maka ụlọ ọrụ iji nweta nghọta dị mkpa nke ndị ahịa na mpaghara ọ bụla nke mmepe ngwaahịa na usoro azụmaahịa iji wee nwee mkpebi azụmaahịa ka mma. N'ịga n'ihu, Methodify ezubere ka ọ bụrụ nke a na-emezi, na-enye ụlọ ọrụ nzaghachi nzaghachi ụdị ngwaahịa ọ bụla, ahịa ma ọ bụ ajụjụ nyocha - ọbụlagodi ndị ha na-echebeghị.
Mezie A tụụrụ ime ya mgbe ị na-eduzi nnukwu ụlọ akụ Canada. Ndị otu Methodify gbochiri ihe ịma aka nke inyere ha aka imekwu nyocha ndị ahịa ebe ha na-ekwenye ngwa ngwa dị elu ngwa ngwa.
Lọ akụ ahụ chere okwu metụtara ụlọ ọrụ taa ihu - oge dị egwu iji gbanwee ngwaahịa na mkpọsa gburugburu, obere ego iji rụọ ọrụ na nnukwu mmefu ego. Ọ bụ ezie na ha chọrọ itinyekwu nghọta ndị ahịa n'ọtụtụ oge na usoro ha, ha makwaara echiche ọdịnala, mgbasa ozi na ngwugwu ngwugwu nyocha gụnyere ogologo oge, nchọpụta nyocha siri ike nke nwere ike ịdị nwayọ na oke ọnụ.
Ka anyị tinye ụfọdụ ihe gburugburu nke a: òtù dị iche iche chọrọ ka mkpebi ndị ọzọ kwado data, na-etinye nrụgide dị ukwuu na ndị ọrụ nyocha na ndị ọrụ nyocha data ha. Anyị makwa itinye ibu ọrụ niile nke nzukọ na ndị ọrụ aka ole na ole bụ nhazi maka ọdachi.
Nke a na - eduga na ndị otu azụmaahịa na - ewe ụzọ mkpirisi ma jiri ngwaọrụ nyocha dịka ntuli aka Facebook iji nweta nzaghachi ndị ahịa. Usoro DIY ndị a na-agụnyekarị ntuli aka na-adịghị na sayensị, nke na-emebi usoro nyocha egosipụtara, na-eleghara njirisi omume igwe mmadụ anya ma na-eme ka ohere nke enweghị isi na ajụjụ ndị na-eduga.
Kama ịnwa igbochi usoro nyocha sayensị, Methodify na-achọ inyere ndị ahịa aka ilekwasị anya na mbọ ha na-etinye ndị ahịa ha na mmepe ngwaahịa na usoro azụmaahịa.
Iji dozie nsogbu ndị a, Mezie Ezubere ka ọ bụrụ ikpo okwu nke:
Na-enye ndị na-ere ahịa ohere ịnwale ngwa ngwa na oge ụfọdụ (ịnabata usoro nnwale na mmụta nke na-ewepụta nsonaazụ ọsọ ọsọ-anaghị echere nnukwu ekpughe otu ọnwa gachara);
Na-eweta onye ahịa ahụ na mkparịta ụka ahụ na ọkwa ọ bụla nke mmepe ngwaahịa na azụmaahịa;
Na-etinye rigor gburugburu usoro nyocha.
Etu esi emezu ihe bu isi
Iji nye ikike ịnwale ọtụtụ oge, Mezie a na-ewu ya na nkà ihe ọmụma. Na isi Methodify na-eme ka nsonaazụ nyocha ọsọ ọsọ na ọnụahịa ọnụahịa dị irè. Usoro ụlọ ọrụ ahụ na-eweta ROI ka mma maka ndị na-ere ahịa na ndị otu nghọta, na-enye ha nri nzaghachi ndị ahịa na-aga n'ihu site na nyocha dị mkpirikpi, 5-10 nkeji na nyocha nke oge 45 nke were izu maka nsonaazụ.
Iji tinye mgbagha na usoro nyocha, ha nwa ọkpọ usoro egosipụtara nke ndị nyocha akwadoro. Uzo esi aju ajuju, uzo ha siri di; ọ dịghị onye nwere ike ịgbanwe usoro ahụ. Nke a na-achota benchmarking na algọridim na-agbanwe agbanwe. Agbanyeghị, akara nwere ike ịrịọ ka ịmepe ma gbanwee usoro, na -emepụta ụgbụ usoro ọhụụ na ikpo okwu. Naanị ika nwere ike ịnweta usoro ọhụrụ a.
Usoro Omume nke Methodify
Otu n'ime ụdị ahịa wiski kacha ere ahịa na Canada, JP Wiser's, nke Corby Spirit na Wine Limited mepụtara, jiri Methodify iji nyere aka wee mezie ma mezie otu n'ime mgbasa ozi kachasị ike nke ebuputara na ụlọ ọrụ mmanya - Jide ya Elu, nke nyere ndị mmadụ ohere ị toro ibe ha n'ụzọ oke. .
Ná mmalite nke atụmatụ mkpọsa, JP Wiser's guzobere otu ndị gụnyere ndị ọrụ ụlọ ọrụ sitere na ọzụzụ dị iche iche na-eri eri site na usoro atụmatụ mkpọsa-usoro nyocha na njikarịcha ha, Methodify.
N'ikpeazụ, akara ahụ chọrọ ịkpali ndị Canada na mba niile itinye otu oge na nlekọta n'ime ọbụbụenyi ha ka ha na-etinye n'ime ha. Iji mee nke a, otu ndị ọrụ ha chepụtara echiche iji mepụta mgbasa ozi nke onye ọrụ zuru oke maka JP Wiser, na-enye ndị ahịa ohere ịkwasa ndị enyi ha n'ihu ọha na mbadamba, redio, na mgbasa ozi mmekọrịta. N’amaghị ụdị ụdị toasts ha ga-enweta na ọwa ndị kachasị mma iji kwurịta okwu a, ha mere usoro iji duzie ule na njikarịcha nke ga-eme ka mkpọsa ahụ gaa nke ọma. Site na iji Methodify wetara olu ndị ahịa n'ọtụtụ oge na mmepe, mkpọsa ahụ mechara emebere maka ndị na-azụ ahịa, ndị ahịa.
Ebe ọ bụ na enwere ike ịpụta nsonaazụ n'ime ụbọchị 1-2, onye ọ bụla na-elekọta ụlọ ọrụ nwere ike iwebata nzaghachi ndị ahịa ozugbo n'ime atụmatụ ha. Kama igbochi mmepe ihe okike, nyocha ahụ mere dị ka ome osooso.
Ule Nyocha Ahịa Gụnyere
Nnwale ókèala: Nwalere mpaghara okike dị iche iche iji chọpụta nke kachasị emetụta ahịa ahịa
Usoro nyocha: Nyochaa ụzọ aghụghọ dị n'ime mpaghara mmeri kachasị chọọ ya, na Bekee na French.
Iji agile n'elu ikpo okwu dika Mezie ime mkpebi n'ime usoro azụmaahịa niile nyere ndị otu ahịa JP Wiser's ozi na ha nwere ike ọ gaghị anwale ndị ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ha agaraghị anwale ókèala echiche tupu ịmalite itinye aka na nyocha ahịa ahịa agile, mana nke a gosipụtara na ọ dị oke mkpa dịka ndị keere mkpebi mkpebi na Corby kewara na mpaghara izizi ewepụtara. O nyekwara aka ịkwado usoro ịntanetị, nke offline na nke nnwale eji eme mkpọsa ahụ dabere na nzaghachi ndị ahịa.
A na-ahụ mgbasa ozi na akara ahụ na-eto eto siri ike dịka nsonaazụ, mana nsonaazụ kachasị mkpa sitere na akụkọ onwe onye na mmetụta ika ahụ nwere na mmekọrịta ndị mmadụ. Site na ntinye na mbadamba ihe na Toronto ka ị na-aastụ mmanya gafere na ọbụbụenyi America na Canada, gụnyere ndị mmadụ 50 n'akụkụ abụọ nke ókèala na Detroit, Michigan na Windsor, Ontario, ụlọ nke JP Wiser.
E nwere ebe anọ ebe Methodify kwụpụrụ iche na ndị asọmpi:
Enwere mkpa doro anya maka ikpo okwu nyocha ntanetị nke na-enye otu ọkwa siri ike dị ka nchịkọta data omenala ma na-enyekwa mfe iji interface dị ka ọtụtụ nke usoro DIY taa.
Ike hazie ikpo okwu maka ụlọ ọrụ;
Dị ka otu n'ime ndị mbata mbụ na ahịa akpaaka, Methodify na-esetịpụ ụkpụrụ ma na-echepụta ọdịnihu nke nyocha ahịa akpaaka;
Otu agbụrụ afọ 20 na ụlọ ọrụ dị n'etiti ụlọ ọrụ na-ejide Methodify, Delvinia, na AskingCanadians, ngalaba nchịkọta data ntanetị n'ịntanetị;
Nkwekorita nke nyocha na mmepe iji nọgide na-agbanwe site na ụlọ ọrụ nne na nna, Onyekachukwu.
Debanye maka usoro ngosi
Tags: ichekwa ego na bankbmofintechnyocha fintechjd amamiheikpo okwu nyocha ahiamezieresearchnyocha
Douglas Karr Thursday, May 14, 2020 Thursday, May 14, 2020
Etu esi choputa PDF file na Adobe
TinEye: Ntughari onyonyo onyonyo